बामदेवलाई कार्यकर्ताको मार्मिक पत्र, तपाईका लागि सिंगो पार्टी किन सति जानुपर्ने ? - AIM Khabar
गृह पृष्ठ > नेपाल समाचार > बामदेवलाई कार्यकर्ताको मार्मिक पत्र, तपाईका लागि सिंगो पार्टी किन सति जानुपर्ने ?
February 29, 2020 February 29, 2020 GRISHI198
किन त्यहाँका जनताले तपाईलाई रुचाएनन् ? हरि पराजुली र डिवी कार्कीका भरमा तपाई चुनाव जित्ने सपना देख्नुभयो ।
म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु, तनहुँ क्षेत्र नं. १ बाट कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई यसपटक किसान श्रेष्ठले हराए, किन हराए ? हामीले भन्यौं रामचन्द्र पौडेलले जितेर केही गरेनन्, यसपटक तपाईहरुले तनहुँलाई पछाडि धकेल्ने की अगाडि बढाउने सोच्नुस् भनेर जनतालाई बुझायौं । एकपटक जनतालाई मन बदल्न भन्यौं र जनताले सोही अनुसार पौडेल हराए र किसान जिताए । तपाईकै जतिको वजन पौडेलको पनि थियो, पार्टीमा । तपाईलाई एउटा जानकारी गराऔं, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हरेक महिना कम्तीमा पनि दुईपटक चितवन आउनुहुन्छ, यहाँका जनतालाई भेट्ने गर्नुहुन्छ । किन आउनुहुन्छ होला सोच्नुस् ।